Director Mohit Sur Ayaa Dhahaya Doorka Shraddha Kapoor Ee Filimka Half Girlfriend Waa Door Soojiidasho Leh!! - iftineducation.com
iftineducation.com – Director Mohit Suri kaaso Shraddha horey ugu sameyay labada filim ee kala ah Ashique2 iyo Ek Villain ayaa aaminsan in Shraddha tahay xidig ad adag sido kalena xawaare sare kusocoto sidaana u ugu aaminay doorkan sido kale kalsooni uu kuqabo in doorkan ay ka baxsan doonto.
“Shraddha ayaa maalin walba 4 saacadod oo tababar ah qaadaneysay mudo bil ah Basketball waana hubaal in ay kasoo bixi doonto doorkas maadama ay tahay xidig dadaal badan, sido kale doorkan ayaa noqon doono door daawadayasha aad usoo jiito.”
Sido kale asigoo hadalkiisa siiwato Mohit Suri wuxuu yiri,” tababaraha caalamiga ah ee Natalia Andre iyo kooxdeda ayaa garab taagna Shraddha si ay u caawiyaan.”
Sido kale qaar kamid ah kooxda filimkaani ee Shraddha isku group ahaayen ayaa basketballka ku fiican ayagana, kuwaaso ka saaciday Shraddha howsha adage e loo dhibay.
Director Mohit Suri hada wuxuu kumashquulsanyahya jarjarida filima (Filim’s edit)
Filimkaan waxaa la daawan doona 19 May 2017 waxaana sheekadan lagasoo minguuriyay qoraaga weyn ee Chetan Bhagat sheekadiisa.
Shraddha Kapoor waxaa filimkaan la hogaaminayo Arjun Kapoor waxaa director ka ah Mohit Suri halka ay soosare ka tahay Ekta Kapoor.